ရက် ၃၀ အခမဲ့ Live TV နှင့် On-Demand Content များကို SKY မှကျေးဇူးတင်ပါသည် Androidsis
ရက်ပေါင်း ၃၀ အခမဲ့ TV နှင့် On-demand အကြောင်းအရာများကို Sky မှသာပေးသည်
Sky သည်စပိန်ကိုမီဒီယာအားလုံးတွင်ကြော်ငြာများပါ ၀ င်သည်။ တီဗွီအပါအ ၀ င်ဒီဆွဲဆောင်မှုရှိသောကမ်းလှမ်းချက်ကိုကျွန်တော်သတိပြုမိသည်၊ ရက် ၃၀ အတွင်းအခမဲ့တီဗီနှင့်အကြောင်းအရာများကိုယူရိုတစ်မျိုးတည်းမပေးပဲအကောင်းဆုံးနှင့်လက်ရှိစီးရီးများ၏လိုအပ်ချက်အရ Sky ကကမ်းလှမ်းသည် နှင့်မည်သည့်ကတိကဝတ်သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းမပါဘဲ။
ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသည် Sky ကိုယ်တိုင်ကတစ်လကို ၁၀ ယူရိုကိုကမ်းလှမ်းတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်ခဲ့တယ် သင်ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးစွာဖြင့်ရက်ပေါင်း ၃၀ ကုန်ဆုံးသည်နှင့်သင်စမ်းသပ်ကာလကာလမကုန်မီ ၀ န်ဆောင်မှုမှမပေးသွင်းရသေးပါကသင်ပေးရမည့်ဈေးနှုန်း။ ဒါကြောင့်ဒီစာကိုဆက်ဖတ်ဖို့ဖိတ်ကြားလိုက်တာနဲ့နောက်ကွယ်မှာဖုံးကွယ်ထားတာတွေရဲ့မကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုသိဖို့ဆက်ဖတ်ပါ သင်၏ Android terminal မှတဆင့်တိုက်ရိုက်တီဗီကြည့်ခြင်းနည်းလမ်းသစ်။ အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူပြီးနောက် Sky service အတွက်တစ်လလျှင် ၁၀ ယူရိုကိုပေးဆောင်သင့်ပါသလား။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ချက်ကိုသိလိုလျှင်, ဒီ post ကိုဆက်ဖတ်နေ။
1 Sky ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အရာအားလုံး၊ အသစ်တီဗီပလက်ဖောင်းအသစ်နှင့်လိုအပ်ချက်ရှိအကြောင်းအရာများ
1.1 Sky ကိုဘယ်လိုငှားရမလဲ
1.2 ရက် ၃၀ အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုအပြီးတွင်တစ်လလျှင်ယူရို ၁၀ ယူနစ်အတွက်၎င်းသည် Sky မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းထားသည်
1.3 Sky အပါအ ၀ င်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်းများ
2 Google Play Store မှ Sky အားအခမဲ့ရယူပါ
Sky ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အရာအားလုံး၊ အသစ်တီဗီပလက်ဖောင်းအသစ်နှင့်လိုအပ်ချက်ရှိအကြောင်းအရာများ
မသန်စွမ်း Sky ငှားရမ်း, ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောလျှောက်လွှာအသစ် တိုက်ရိုက်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း ၁၂ ခုနှင့်ရုပ်ရှင်နှင့်အကောင်းဆုံးတီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများအစရှိသည့်လိုအပ်သည့်အကြောင်းအရာများThe Walking Dead၊ Big Bang၊ ရှန်နာရာဇဝင်များ၊ ပါရမီရှင်များ - ရွေးချယ်ထားသော၊ ခေတ်သစ်မိသားစု၊ စကားမပါသော၊ ညဆိုင်းသို့မဟုတ်အခြားများစွာသောအခြားခေါင်းစဉ်များ၊ ငါတို့သာ၎င်း၏ဝဘ်စာမျက်နှာရိုက်ထည့်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် နှင့်သင်၏အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးရုံနှင့်အတူစတင်ပါ Try it ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါသင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ နာမည်အပြည့်အစုံနှင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးမှငွေပေးချေနိုင်သည့်နည်းလမ်းကိုထည့်ပါ အကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုသင်၏ Paypal အကောင့်မှတစ်ဆင့်ရယူနိုင်သည်.
သင်သည်သင်၏ခရက်ဒစ်ကဒ် (သို့) Paypal အကောင့်ကို ping လုပ်နေလျှင်တောင်မှသင်သည် ၀ န်ဆောင်မှုမှမပေးသွင်းရသေးပါကပထမ ၃၀ ရက်မတိုင်မှီသင့်အားယူရိုတစ်လုံးတည်းငွေကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်၏ပထမနေ့မှ စတင်၍ တောင်းဆိုနိုင်သည့်ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဝယ်လိုအားရှိအကြောင်းအရာများကိုသင်၏ရက် ၃၀ အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းမှလေးစားလိုက်နာခြင်းခံရမည်။.
ယခုတွင်သင်သည် Android အတွက်လျှောက်လွှာကိုသာဒေါင်းလုတ်လုပ်ရမှာဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤလိုင်းများအောက်တွင်ကျွန်ုပ်ချန်ထားသည့်အလွန်အမြင်၊ ခေတ်မီ။ အလိုလိုသိသောပုံစံဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် Android application သည်သတင်းအချက်အလက်များကို Chromecast နှင့်အခြားအရာများမှကြိုးမဲ့ပေးပို့ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ ဒါငါ့အမှားကြီးအတွက်ပါ တီဗီကြည့်ဖို့ app လွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုများကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် (Chromecast, DLNA, etc) စသည်တို့သည်၎င်း၏ပထမဆုံး version များမှထွက်ပေါ်လာသင့်သည်။
ရက် ၃၀ အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုအပြီးတွင်တစ်လလျှင်ယူရို ၁၀ ယူနစ်အတွက်၎င်းသည် Sky မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းထားသည်
အမှန်တရားကတော့ Wuaki TV၊ Netflix၊ HBO Spain, Open Sports သို့မဟုတ် Being Sports စတဲ့ applications တွေကိုစမ်းသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Sky ကပေးတဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုမှာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်က ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်သံကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာများဖြင့်ရုပ်သံလိုင်း ၁၂ ခုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတိုက်ရိုက်လွှင့်သည့်တစ်ခုတည်းသော platform ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိတည်ရှိနေသောအခြားပလက်ဖောင်းများသည် ၀ န်ဆောင်မှုနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစိုက်သည်၊ သို့မဟုတ်သူတို့က ၀ ယ်လိုအားတွင် Netflix၊ Wuaki TV နှင့် HBO ကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားအားကစား TV ကမ်းလှမ်းခြင်းကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်တီဗွီကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ Total Channel ပလက်ဖောင်း၏လိုင်းများကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ဝယ်လိုအားရှိအကြောင်းအရာအပြင်ရုပ်မြင်သံကြားကိုတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်သည့်တစ်ခုတည်းသောပလက်ဖောင်းဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းသည်တစ်လလျှင်ယူရို ၁၀ ဒေါ်လာပေးရသောကြောင့်တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုဖြစ်သည် တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စက်သုံးလုံးအထိတစ်ပြိုင်နက်ချိတ်ဆက်ပါ.
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ရှင်းပြနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Android application သို့မဟုတ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်မည်မျှကြိုက်နှစ်သက်သည်၊ ၎င်းမှတိုက်ရိုက်တီဗီလိုင်းများနှင့်၎င်းမှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့် on-demand အကြောင်းအရာများကိုပျော်မွေ့ရန် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ် ၀ င်ရောက်နိုင်ပါပြီ။ သင်ရှာဖွေနေသည့်အခသည် streaming ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုငှားရမ်းခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုစဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
developer များအနေဖြင့်ဘက်ထရီများကိုထည့်သွင်းရန်နှင့် Google's Chromecast သို့မဟုတ် DLNA ကဲ့သို့သောကိရိယာများမှတစ်ဆင့် screen ကိုပေးပို့ရန်အတွက် application ကိုသဟဇာတဖြစ်စေရန်လိုအပ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်၎င်းပြောင်းလဲမှုကိုကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုသင့်ပါ။ လျှောက်လွှာ; ငါ့အတွက် Android နှင့် application ကို install လုပ်ပြီးလွန်ခဲ့သောအပတ်က ၀ န်ဆောင်မှုတွင်စာရင်းသွင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အတွက်။ Live TV တီဗီဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဝယ်လိုအားရှိသောအကြောင်းအရာများကိုငှားရမ်းရန်ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.
ယခု မှစ၍ သုံးပတ်အကြာ ၁၀ ယူရိုပထမငွေပေးချေမှုဖြစ်လာလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး app ဖြစ်သည်ဟုမည်မျှပင်ထင်မြင်စေကာမူ screen ပေးပို့ခြင်းနှင့်လိုက်ဖက်မှုရှိစေရန်နောက်ဆုံးနေ့ကိုသင့်အားပေးမည်။ ၀ ယ်လိုအားအကောင်းဆုံး TV ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုမှပယ်ဖျက်ရန်ရွေးချယ်ပြီး၎င်းကို Google Chromecast ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်စောင့်ဆိုင်းပါမည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ထပ်မံ၍ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်ငှားရမ်းရန်၊
Sky အပါအ ၀ င်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်းများ
Channel ကိုOperación Triunfo 2017
၎င်းလိုင်း ၁၂ ခုနှင့်Operación Triunfo 2017 ၏တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်းအပြင် live Academy လည်း၊ Sky သည်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်း၏ပြည့်စုံသောရာသီများနှင့်အတူစီးရီးများစွာကိုကမ်းလှမ်းသည် ဝယ်လိုအားအပေါ်စောင့်ကြည့်ဖို့ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ခု catalog ။
အပြီးသတ်ဖို့၊ ငါဗီဒီယိုထဲမှာအကြိမ်အနည်းငယ်လောက်ပြောပြပြီးပြီဆိုတာပြောပြပါ ဤသည်မှာမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုကမကထပြုခြင်းသို့မဟုတ်ငွေပေးချေခြင်းအကြောင်းအရာမဟုတ်ပါ။ Androidsis စာဖတ်သူများနှင့် Androidsisvideo YouTube channel ကြည့်ရှုသူများအားစိတ် ၀ င်စားစေမည့်ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ငှားရမ်းပြီးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာထောက်ခံချက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
Google Play Store မှ Sky အားအခမဲ့ရယူပါ
Sky - တီဗီလိုင်းများနှင့်စီးရီး
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ရက်ပေါင်း ၃၀ အခမဲ့ TV နှင့် On-demand အကြောင်းအရာများကို Sky မှသာပေးသည်